Budata Antivirus Ngwanrọ maka Windows
Budata Antivirus Ngwanrọ
Emsisoft Internet Security Pack bụ usoro nchekwa ọtụtụ ọrụ ị nwere ike iji chebe kọmputa gị pụọ na nje ma hụ na nchekwa ịntanetị gị. Ijikọta atụmatụ firewall na antivirus, mmemme ahụ na -enyocha ma njikọ mbata na mpụga na ịntanetị na malware. Emsisoft Internet Security Pack, ebe ị nwere ike ịhụ mmemme Emsisoft Anti-Malware na Emsisoft...
Avast Ultimate bụ nchekwa na nzuzo na nchekwa arụmọrụ nke ndị ọrụ Windows PC. Ọ na-agwakọta ngwa ngwa 4 dị notu ebe: Avast Premier, nke na-enye nchebe kachasị, Avast Cleanup Premium, diski nhicha na ngwa ngwa, Avast SecureLine VPN, nke na-ezipụ njikọ ịntanetị, yana Avast Passwords Pro, nke na-eweta nbanye mkpịsị aka na weebụsaịtị kama...
Ị ga-enwe ike ichebe kọmpụta gị na data gị site na nyocha ozugbo, ekele Avira Antivirus Pro, nke na-enye nchebe ọkachamara pụọ ​​nihe egwu niile na-emebi uto gị site na ịbanye na sistemụ na ịntanetị. Avira Antivirus Pro, yana atụmatụ ya etolitela ọkachasị maka iyi egwu ịntanetị na iji ịntanetị na -abawanye, na -enye igwe nyocha omume na...
Ngwa mwepụ Junkware bụ ngwa bara uru yana ntụkwasị obi nke na -enyocha kọmputa gị maka malware, Adware, ogwe ngwaọrụ na ngwanrọ ndị ọzọ nwere ike imebi. Na mgbakwunye na ịbụ mmemme iwepụ malware, mmemme ahụ, nke nwekwara ike wepu ngwanrọ na-arapara na ihe nchọgharị gị ma sie ike iwepu, bụ ọgwụgwọ maka ọtụtụ ndị ọrụ nwere njirimara...
Tencent PC Manager bụ mmemme antivirus nke na-enye ndị ọrụ ngwa ọrụ nchekwa dị mfe maka nchebe virus. Ihe omume antivirus a nefu, nke nwere usoro ntinye dị mfe, bụ ngwá ọrụ ị nwere ike iji ma ọ bụrụ na ịchọrọ igbochi nje ịbanye na kọmputa gị. Trojans, ikpuru, rootkits na malware yiri nke ahụ nwere ike iweghara usoro gị na-enweghị ihe...
Ngwa ihe mberede Emsisoft bụ ngwungwu nchekwa zuru oke nke ị nwere ike iburu gị noge ọ bụla. Mgbe enwere nsogbu na kọmpụta gị ma ọ bụ mgbe enyi gị rịọrọ gị maka enyemaka na ngwanrọ ọjọọ nke na -emetụta kọmputa ha, ị nwere ike buru ngwugwu ihe mberede Emsisoft wee gbatara gị ọsọ enyemaka. Enwere ngwa dị iche iche ị nwere ike iji nokpuru...
Comodo Hijack Cleaner, sọftụwia ị nwere ike iji chebe onwe gị pụọ na mgbasa ozi oria ma ọ bụ ọdịnaya ndị ọzọ emepere na ihe nchọgharị ịntanetị, na-enye aka na arụmọrụ gị na nchekwa gị site na ịchekwa usoro gị. Na-akwado Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer, Comodo Dragon na Comodo Ice Dragon nchọgharị, mmemme a na-anwale...
Zemana AntiMalware na -enyocha kọmputa nime naanị nkeji isii, na -achọpụta ma wepụ malware. Mmemme a, nke na -arụ ọrụ na -enweghị nrụnye, na -achọpụta ngwanrọ niile dịka rootkits, trojans, bots, virus, ikpuru, spyware na adware. Na -enyocha injin nke mmemme antivirus ise dị iche iche, Zemana AntiMalware na -arụ ọrụ na mmemme nchekwa ndị...
Ad-Aware Free Antivirus bụ mmemme nchekwa na-aga nke ọma nke na-ejikọta igbochi spyware dị elu yana mmemme antivirus siri ike ma na-echebe ndị ọrụ pụọ nụdị ihe iyi egwu mebere ọ bụla. Ijikọta atụmatụ abụọ dị iche iche na otu mmemme, ngwanrọ na-echebe ndị ọrụ megide trojans, ndị na-achọ, rootkits, bots na hacking omume. Ọ bụ ezie na...
Panda Cloud Cleaner bụ mmemme antivirus dị mfe iji na-enyocha ntanetị maka ngwanrọ na nje nwere ike imerụ kọmputa gị, nihi teknụzụ igwe ojii dị elu. Site na Panda Cloud Cleaner, ị nwere ike ịchọpụta ma hichaa ọbụna ngwanrọ ọjọọ nke mmemme nje ọdịnala enweghị ike ịchọpụta, ma dobekwa nchekwa kọmputa gị. Ihe ị ga - eme bụ ibudata Panda...
TrojanHunter bụ usoro mwepụ nke nje na-enyere gị aka wepu nje site na nyocha kọmputa gị maka malware. TrojanHunter na-eji interface dị mfe ma nwee nghọta. Anyị enweghị ike ịkwado mmemme a dị ka ihe ngwọta antivirus zuru ezu; nihi na TrojanHunter bụ ngwa ọrụ emebere iji mechie adịghị ike nke sọftụwia antivirus gị dị ugbu a. TrojanHunter...
Ihe omume IObit Malware Fighter Free bu netiti ndi ozo choro ka ndi oru choro ichedo komputa ha nenye ha nsogbu, enwere m ike ikwu na obu otu nime ngwa ndi neme oru ya nke oma. Mmemme ahụ, nke emepụtara dịka ihe ngwọta megide ntinye nke mmemme anyị na-etinye na kọmpụta anyị na ngwa malware, dịkwa oke aka na igbochi ohi data onwe onye. ...
McAfee AVERT Stinger bụ mmemme nje eji ehichapụ ụfọdụ nje. Ihe mmemme a abụghị mmemme nje, kama ọ bụ mmeju. Stinger na -eji teknụzụ nyocha ọhụụ na nke ka mma. Usoro mmemme a na -eweta nyocha na nrụzi akọwapụtara maka nje W32/Polip. Na nkenke, mmemme nje McAfee AVERT Stinger nwere ike ihichapụ ọtụtụ nje nwere aha dị iche iche malite na...
EMCO Malware Destroyer bụ mmemme mwepu nje na-enweghị nefu ị nwere ike iji wepu malware abanyela na kọmputa gị. Akụkụ kachasị mkpa nke usoro ihe omume ahụ bụ na ọ nwere ike nyochaa ngwa ngwa. Ekele maka njirimara a, ịnwere ike ịchọpụta ma hichapụ nje na sistemụ gị na sekọnd, ma ị gaghị efunahụ arụmọrụ gị. Ihe na-eme ka mmemme a pụta...
Comodo Cloud Antivirus nwere ike ịkọwa dị ka ihe omume antivirus nke na-enye nchebe zuru oke nke ndị ọrụ site na iji ike igwe ojii kọwaa nazụ ya. Ngwa antivirus a, nke ị nwere ike ibudata ma jiri kpamkpam na kọmputa gị, jikọtara arụmọrụ antivirus oge gboo dị ka nyocha virus na mwepụ nje na teknụzụ igwe ojii, na-eme ka ọ dị mfe ịchọpụta...
Comodo AntiVirus nọgidere na-echedo kọmputa gị megide mgbasa nje nwere ike ịgbasa ma na-eme nhicha mgbe ọ dị mkpa. Ọ bụghị naanị ịchọpụta na ịkọwapụta nje, Comodo AntiVirus na-achịkwa malware na ngwa ya na teknụzụ ya pụrụ iche. Comodo AntiVirus, mmemme nke ndị ọrụ nke ọkwa niile nwere ike ịhọrọ, na-arụ ọrụ nke ịlele ma mebie ọrụ gị na...
Panda Free Antivirus bụ sọftụwia antivirus kachasị ọhụrụ nke ụlọ ọrụ Panda kwadebere, nke ama ama maka ngwa nchekwa ya, ma nye ya ndị ọrụ niile nefu. Ihe omume ahụ, nke dị dị ka Panda Cloud Antivirus noge gara aga, ugbu a bipụtara dị ka Panda Free Antivirus ma nwee ike ichebe kọmputa gị megide egwu egwu kachasị ọhụrụ. The interface nke...
PCKeeper Antivirus bụ mmemme antivirus a pụrụ ịtụkwasị obi ma dịkwa egwu nke ị nwere ike iji chebe kọmputa gị pụọ na nje na trojans na -emerụ ahụ site na mpụga. Ị nwere ike iji ụdị nnwale nnwale mmemme a, ekele maka ịdị nfe ya, ọ naghị ada mbà kọmpụta gị, ị nwere ike chefuo na ọ na -agba nokirikiri. Mmemme a, nke na -emelite nchekwa data...
UsbFix bụ mmemme bara uru yana nefu nke na -achọpụta ma hichapụ faịlụ na nje niile na -emerụ ahụ na mkpanaka USB gị na draịvụ flash ndị ọzọ. Mmemme a, nke na -enye ịdị mma nke ihichapụ faịlụ dị ize ndụ ruo ama ama gị na igwefoto dijitalụ, dị nfe ma mepụta ya nụzọ na -adịghị agwụ ike kọmputa gị. Dị ka ị maara, mkpanaka USB bụ ngwaọrụ...
Ejiri ngwa ọrụ mwepụ nje Kaspersky nefu, Kaspersky Virus Removal Tool, iji wepu ụdị nje niile na kọmputa gị. Mmemme a, nke akwadobere site na iji teknụzụ nyocha dị irè ejiri na Kaspersky Anti-Virus, bụ nhọrọ dị mma maka ihicha sọftụ ọjọọ nke batara na kọmputa gị. Ebe mmemme a bụ naanị ngwa ọrụ iwepụ nje, ọ naghị enye nchekwa oge niile na...
Nchedo zuru ụwa ọnụ Panda, sọftụwia nchekwa zuru oke iji chebe gị pụọ nụdị egwu dị nịntanetị na nke na -anọghị nịntanetị, agaghị ekwe ka nje, spyware, rootkits, hackers, ihe egwu dị nịntanetị, ndị ohi njirimara. akụrụngwa, na-enye injin ya na-egbochi spam. Ka ị na-echebe ozi gị, ọ na-echebe ụmụaka pụọ ​​na iyi egwu ịntanetị na nzacha nne...
Sistemụ nnapụta Avira bụ ngwanrọ mgbake sistemụ nke ga -enyere gị aka mgbe sistemụ arụmọrụ Windows gị anaghị ebido. Mgbe ụfọdụ, Windows nwere ike ọ gaghị enwe ike mepee site na ịhapụ ọrụ ya nihi mwakpo nke ngwanrọ ọjọọ dịka nje. Ewezuga nke a, ihe ndị dị ka ngwanrọ arụnyere ọhụrụ na esemokwu ngwaike nwere ike ime ka Windows ghara...
Trojan Killer bụ ngwa nchekwa nke ị nwere ike iji hichaa ngwanrọ kọmputa ọjọọ. Ị nwere ike jiri Trojan Killer, kpochapụ trojans na kọmputa gị ngwa ngwa yana rụọ ọrụ nke ọma, ị nwere ike iji hichaa ọtụtụ ụdị malware, dị ka Trojan, spyware, adware, dialer, malware na ọtụtụ ndị ọzọ. Ọ bụrụ na ị na -eme nchọgharị na ịntanetị mgbe niile, ị...
Enwere ike ịkọwa Dr.Web LiveDisk dị ka mmemme mgbake kọmputa nke ga -enyere gị aka weghachite data gị mgbe kọmputa gị ghọrọ ihe na -adịghị mma nihi nje. Dr.Web LiveDisk, nke bụ ngwa mgbake sistemụ nke ị nwere ike ibudata ma jiri nefu na kọmputa gị, na -enye gị ohere ọzọ iji jiri kọmputa gị mgbe sistemụ arụmọrụ Windows gị anaghị arụ ọrụ...
Ihe nyocha Kaspersky bụ ngwa na-enyocha kọmputa gị nke Windows nefu na ngwa ngwa, na-agwa gị gbasara nje na ihe iyi egwu ndị ọzọ dakwasịrị na sistemụ gị, na-enyere gị aka inwetaghachi usoro ahụike. Nyocha Kaspersky Security bụ obere ngwa nchekwa ị nwere ike ibudata wee nyochaa sistemụ gị ngwa ngwa ma ọ bụrụ na ịnweghị sọftụwia nchekwa...
Panda Antivirus Pro, nke na-echebe kọmpụta megide ụdị sọftụwia ọjọọ niile ama ama na-egbochi ihe egwu dị ka nje, spyware, rootkits na wayo njirimara site na ụdị 2016 ya ka mma. Ndị ọrụ Panda Security nwere ike mụta gbasara malware ozugbo wee welie nchekwa nke kọmpụta niile ejikọtara. Usoro a na -eji obere ume ebe echekwabara kọmpụta gị...
Enwere ike ịkọwa Avetix Antivirus dị ka mmemme antivirus zuru oke nke emepụtara iji kpuchido sistemụ ndị ọrụ na ngwanrọ ọjọọ. Ihe omume a, nke enwere ike ibudata ya nefu, nwere ike jiri onye ọ bụla chọrọ ichedo kọmpụta nke ha pụọ ​​na ngwanrọ na nje na -emerụ ahụ. Usoro ihe omume nwere ọtụtụ atụmatụ bara uru. Emebere atụmatụ ndị a ma...
Dr. Web Antivirus bụ mmemme antivirus ị nwere ike họrọ ma ọ bụrụ na ịchọrọ ichebe kọmputa gị pụọ na nje na ngwanrọ na -emerụ ahụ. Mmemme antivirus emebere iji chebe kọmputa gị pụọ na iyi egwu mpaghara na nịntanetị, Dr. Antivirus weebụ abụghị naanị mmemme iwepụ nje nke ị nwere ike iji hichapụ nje ndị batara na kọmputa gị, kamakwa sọftụwia...
ClamAV bụ ngwa nchekwa mepere emepe nwere ike mata ihe karịrị puku nje 750. Mmemme a, nke nwere atụmatụ dabere na MS-DOS, nwere ike inyocha nje ngwa ngwa yana were were. ClamAV, nke nwere ike ịdị na -aga nihu, nwere ike inyocha faịlụ abịakọrọ dịka ZIP na RAR. Mmemme a, nke na -adọ onye ọrụ kọmputa aka na ntị ma ọ bụrụ na faịlụ sistemụ...
NANO AntiVirus bụ ngwa dị ike nke nwere ike ichebe gị pụọ nihe iyi egwu nje dị ugbu a. Ekele maka ojiji akụrụngwa dị ala, mmemme ahụ, nke na -adịghị agwụ ike na sistemụ gị, nwekwara ike inyocha ebe nchekwa mpụga maka nje. Akụkụ kacha mkpa nke mmemme a bụ sistemụ nchedo oge. Nchedo oge, nke na-amalite mgbe onye ọrụ na-enweta faịlụ ọ...
Xvirus Personal Guard bụ sọftụwia antivirus efu ị nwere ike iji chebe kọmputa gị pụọ na nje. Mgbe ụfọdụ kọmputa anyị na -aghọ ihe a na -agaghị ahụ anya nihi nje ndị a na -ebute na ịntanetị ma ọ bụ site na ngwaọrụ mkpanaka dịka osisi USB. Ngwanrọ ọjọọ a, dị ka Trojans, ikpuru, keyloggers, bots, na -achịkwa akụkụ nke kọmpụta anyị dị...
Baidu Antivirus bụ sọftụwia antivirus na -aga nke ọma na -eji ngọzi nke teknụzụ ịgbakọ igwe ojii. Nihi kọmpụta igwe ojii, mmemme ahụ nwere ike meghachi omume ozugbo enwere ike megide nje ọhụrụ emepụtara na kuki nje na -enweta na ịntanetị. Ihe mmemme a na -enyekwa gị ohere ịgbanwe netiti modulu nyocha nje dị iche iche. Ya mere, nje nke na...